Nnukwu Ọdịdị Dị Elu Pịgharịa n'Ọnụ Ụzọ China Manufacturer
Nkọwa:Uzo Pelu Uzo,Mgbanwe dị elu gbagote,Mepee Ọnụ Ụzọ
Home > Ngwaahịa > Ọnụ Ụzọ Dị Elu > PVC High Speed ​​Door > Nnukwu Ọdịdị Dị Elu Pịgharịa n&#39;Ọnụ Ụzọ
Nnukwu Ọdịdị Dị Elu Pịgharịa n'Ọnụ Ụzọ
Ihe Nlereanya.: HS-002
Nnukwu Ọdịdị Dị Elu Pịgharịa Elu Ọnụ ụzọ bụ ụzọ ọhụrụ dị nnọọ ngwa ngwa. Ọ dị mma maka ụlọ ọrụ, ụlọ nkwakọba ihe, ụlọ ọcha na ihe ndị ọzọ. Plastic roll up Doors are made with PVC and 201 # stainless steel. Ọ nwere ike meghee site na Radar sensor & Loop sensọ, ohia bọtịnụ, aka prite na usoro iwu ndị ọzọ.
A na-eji ọnụ ụzọ dị elu rụọ ọrụ na Ụlọ Nche, ụlọ ọcha, ụlọ ọrụ na ihe ndị ọzọ.
1. Nhazi usoro Japanese Mitsubishi Inverter, PLC, servo control systerm na components ndị ọzọ.
2. usoro di omimi Na-eburu onye mmepụta ụgbọ elu pụrụ iche dị elu, 0.75-2.2KW, dị ka ọnụ ụzọ ahụ si dị họrọ ụdị. Nhọrọ abụọ maka nhọrọ, SNMA ma ọ bụ SEW.
3. Ịrụ ụlọ --Doorframe na-eji akwụkwọ ntu oyi nke Shanghai Baosteel, 2mm thickness, paint under conditions of high temperature and stic-free, color optional. --Nwe ihe onwunwe na-etinye akwa mkpuchi ụlọ ọrụ dị elu, 0.8mm thickness, yellow, blue, red, white, orange and other color for selection. --Itughari nke a na-eji kpoo pve kpochapu si Japan, nha na ebe dika iwu gi.
4. Ụzọ meghere Ntugharị / ụwa ntinye / nchịkwa nchịkwa / eriri eriri / akwụkwọ ntuziaka.
5. Ebe ndị dị mma Ọdụ ụgbọ mmiri, ụlọ ọrụ, ụlọ ahịa, ụlọ ọgwụ, ọgwụ, ahụike, akụrụngwa, ụlọ ọrụ nri, nkesa, logs, oyi na-echekwa & refrigerators
Elu ọsọ mega ụzọ Kpọtụrụ ugbu a
PVC Rapid gbagote n'Ọnụ Ụzọ Kpọtụrụ ugbu a
Ụlọ ọrụ na-arụ ọrụ ụlọ ọrụ dị elu Kpọtụrụ ugbu a
Uzo Pelu Uzo Mgbanwe dị elu gbagote Mepee Ọnụ Ụzọ Uzo elu di elu Uzo ndi ozo Uzo Uzo Uzo Uzo Umu Okpu Uzo Udo Obu Ugbo Ozo